Dhibaatooyinka Tahriibayaasha Soomaalida ah
Kadib burburkii dowladii MAXAMED SIYAD BARRE ayaa dalka soomaaliya wuxuu isku badalay meel ay ku hardamaan kooxo iska soo horjeeda kuwaas oo ku salaysan qabiilka soomaalida ragaadsaday.
Mudadaas kadib waxaa soo baxay hoogaamiye kooxeedyo mid waliba dan gooni ah leeyahay ,hadaba shacabka soomaalida ayaa waxay noqdeen dhibanayaasha mar walba uu soo gaaro qasaaraha ka dhasha dagaalada u dhexeeya kooxahan ku hardamayay dalka soomaaliya gaar ahaan caasimada Muqdisho taasoo noqotay meelaha ay ka dhacaan qalalaasaha ama rabshadaha ugu badan .
Dhibaatooyinkan ka dhacay dalka walina ka soconaya ayaa waxaa la aaminsanyahay in ay ka danbeeyaan dalal shisheeye kuwaas oo ay kamidyihiin Maraykanka,Yurub iyo waliba qaar ka tirsan dowladaha Afrika.
Hadaba nolosha dalka ayaa waxay noqotay mid aad u adag ayna ku noolaan Karin dadka danyarta ah gar ahaan kuwa aan laga biilin dalka dibadiisa kanacsatana aan ahayn.
Hadaba in badan oo soomaali ah haba u badnaadaan dhalinyaro ayaa waxay go'aan sadeen in ay ka hayaamaan dalka si ay u heleen meel nolol iyo ammaanba ka fiican soomaaliya,hadaba meelihii ugu horeeyay ee ay soomaalidu bilaabeen in ay u haajiraan ayaa waxaa ka mid ah dalka sucuudiga kasoo loo siimaroy magaalada dakada ah ee Boosaaso ayadoo laga gudbayo Gacanka Cadan.
Inta badan tahriibayaasha ayaa waxay la kulmaan dhibaatooyin iyo caqabado aan la qiyaasi Karin gaar ahan dadka ku safra Badaha .
Inta badan dadka u tahriiba Sucuudiga ee ka dhoofa magaalada Boosaaso ayaa waxaa dhacda inay doomuhu laqaliman ama si ula kac ah looga daadiyo waasida dadka qaarkii ay aaminsanyihiin taasoo ay ku nafwaayeen kumanaan soomaali ah .
Sida ay sheegayaan Warbixinnadu tan iyo bilowgii Dagallada Sokeeye iyo wixii ka dambeeyay 1991-kii, waxaa sannadkiiba Badda u dhaxaysa labada dal ku halligma tiro 5000-Tahriibayaal u badan Soomaali, kuwaas oo uu hilibkooda iyo dhiiggoodu ka dhergo Libaax-badeedka aadka ugu badan halkaas.
Mudooyinkan danbe waxaa bilowday in ay soomaalidu utahriibaan dhinaca Turkiga si ay ugu sii gudbaan dalalka yurub ,dadkan intooda badan ayaa waxay ka yimaadaan dalalka carabta gaar ahaan Sucuudiga iyo Imaaraadka (UAE) waxayna soo maraan Jordan oo ay si dhuumaalaysi ah ugu gudbaan Siriya.
Hadaba mudo laga joogo isbuuc waxaa xuduudka wadanka Jordan lagu qabtay gabdho soomaaliyeed oo si qaldan uga gudbayay xuduudka . Gabdhahaas ayaa waxaa tiradooda lagu sheegay illaa 4 gabdhood,gabdhahan ayan cadayn illaa hada meesha lageeyay iyo waliba inay badqabaan iyo inkale .
Sidoo kale waxaa jira dad badan oo lagu qabtay ayagoo kasii baxaya xuduudka Siriya .
Dadka inta badan la qabto ayaa waxaan jirin hay'ad ama cid u dooda inta badana aan war laga qabin halka ay ku danbeeyeen .
Ugu danbaystii dhamaan marka la isku soo duubo dhibaatooyinka dadka ku dhacaya ayaa waxay tahay daganaansha la'aanta ka jirta wadankeena hooyo ayadoo aan ognahay in soomaaliya ay tahay dal qani ku ah xaga khayraadka dabiiciga ah iyo xoolaha nool.